theZOMI: [mrsorcerer:38021] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ကားတိုက်ခံရ၍ အမှုဖွင့်ရန်လာသူများကို ရဲဝန်ထမ်း (၃၀) ခန့်ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ပြီး ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှုဖြင့်အမှုဖွင့်
[mrsorcerer:38021] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ကားတိုက်ခံရ၍ အမှုဖွင့်ရန်လာသူများကို ရဲဝန်ထမ်း (၃၀) ခန့်ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ပြီး ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှုဖြင့်အမှုဖွင့်
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ကားတိုက်ခံရ၍ အမှုဖွင့်ရန်လာသူများကို ရဲဝန်ထမ်း (၃၀) ခန့်ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ပြီး ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှုဖြင့်အမှုဖွင့်
Zaw Win and မတစ်ထောင် တစ်ကောင်ဘွား shared ကိုသောင်း ပုလဲမြေ'sphoto.
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ဧပြီလ (၁၆) ရက်နေ့ မဟာသင်္ကြန်အတက် နေ့က စံပြ (၅) လမ်းရေကစား မဏ္ဍပ်ရှေ့တွင် စူပါစလွန်းဘင်ကား တစ်စီးဝင်တိုက်သွားသည့် သူကို စံပြ ဆေးရုံသို့ဦးစွာပို့ဆောင်ခဲ့သော် လည်း ငွေကြေးခက်ခဲခြင်းကြောင့် ဆေးရုံမှ ပြန်လာကာရဲစခန်းသို့ သွားရောက်ပို့ဆောင်သည့်လူငယ် ဦးမောင်ဇင်ကိုကို (၁၈) နှစ်၊ ကုလား (ခ) ပြည့်ဖြိုးပိုင် (၂၀) နှစ် (ကားတိုက်ခံရသူ) မောင် အောင်ကိုကို (၂၁) နှစ် (ဦးခေါင်းကွဲ၊ စံပြဆေးရုံတွင် ကုသပြီး နေအိမ်တွင်ဆေးကုသမှု ခံယူနေ)၊ ဦးသိန်းလှိုင် (၄၅) နှစ် (မျက်နှာတစ်ခြမ်းညိုမဲစွဲ)စသည့် (၄) ဦးကို သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်း ၀န်းထဲမှ ရဲဝန်ထမ်းအင်အား (၃၀) ခန့်က သံတုတ်နံပတ်တုတ် စသည်တို့ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ သောကြောင့် ဒဏ်ရာအနာတရ များရရှိခဲ့သော်လည်း ၀ိုင်းရိုက်သည့် ရဲစခန်းမှ ရဲများကိုအရေးယူခြင်း မပြုသည့်အပြင်ပြည်တွင်းမီဒီယာ တစ်ခုဖြစ်သည့် တွင် ထိုသတင်းကိုဖော်ပြရာ၌ "သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းဝန်းအတွင်းဒုရဲအုပ်တစ်ဦးကို ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ် မှုဖြစ်ပွား"ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သောကြောင့် ကာယကံရှင် များက မကျေနပ်၍ ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အား သွားရောက်တိုင်တန်းသော အခါ "ရဲတွေဆိုတာလည်းပြည်သူ ပါပဲ။ ငယ်တဲ့အမှုကို ကြီးအောင် လုပ်ရင်ရဲတွေဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေပဲ ဒုက္ခရောက်မှာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် တွေမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ" ဟု ဖြောင့်ပြလွှတ် လိုက်သောကြောင့် ကာယကံရှင်ပြည်သူ (၄) ဦးက Hot News Journal တိုက်သို့လာ ရောက်ရင်ဖွင့်ခဲ့ကြပါသည်။
ဦးခေါင်းတွင်အရေပြားကွဲ ပြီးဆေ့း ရုံက ဆင်းခိုင်းသဖြင့် နေအိမ်တွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေဆဲဖြစ်သည့် အသက် (၂၁) နှစ်အရွယ် ကိုအောင်ကိုကိုက သူကြုံတွေ့ခဲ့ ရသည့်အဖြစ်အပျက်အားပြောပြ ရာတွင် ""အစ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဗျာ၊ တာဝန်သိပြည်သူအနေနဲ့ သင်္ကြန် မှာ ကားတိုက်ခံရတဲ့ လူကိုဆေး ရုံပို့ပေမဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် ပြန်ဆင့်ပြီး တာဝန်နဲ့ မဏ္ဍာပ်ကို လာတဲ့ ရဲကိုအကူအညီတောင့် တာငါနဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး မလုပ် ပေးလို့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းရဲ့စခန်းသွားပို့တာ ကို သင်္ဃန်းကျွန်းရဲ့စခန်းထဲက ပြည်သူ့ရဲဆိုတဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေက ၀ိုင်းရိုက်တာဗျာ။ တစ်ယောက်ဆို တစ်ကိုယ်လုံးညိုနေတယ်။ တစ်ယောက်ဆိုမျက်နှာတစ်ခြမ်း ညိုမဲစွဲသွားတယ်၊ ကျွန်တော်ဆို ခေါင်းကွဲ သွားတယ်။ အဲဒါကိုချုပ်ပေးပြီး တော့ ဆရာဝန်ကဆေးရုံကနေ ဆင်းခိုင်းတယ်။ အဲဒါကို မကျေ နပ်လို့လွှန်တော်အမတ်ကို သွား တိုင်တဲ့အခါသူကဘာပြောလဲဆို တော့ "ရဲတွေဆိုတာလည်း ပြည်သူ ပါပဲ။ ငယ်တဲ့အမှုကို ကြီးအောင် လုပ်ရင်ရဲတွေဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေ ပဲ ဒုက္ခရောက်မှာ ကြီးကြီးကျယ် ကျယ်တွေမလုပ်တာအကောင်းဆုံး ပါပဲ"ဟု အစ်ကိုရယ်။ စဉ်းစားကြည့် ပါ ကျွန်တော်တို့မိဘနေရာမှာ သူသာဆိုရင်အဲဒီစကားမျိုးပြောပါ့ မလားဗျာ"ဟု ပြောကြားသည်။
၎င်းတို့၏အဒေါ်တော်စပ် သူဒေါ်စန္ဒာဝင်းကရဲစခန်းအပြင် မှာနေ၍ သူတွေခဲ့ရသည့်ဖြစ်စဉ် ကို ပြောပြရာတွင် "ရဲတွေက ဒီကောင်တွေကိုအသေသတ်ဆို ပြီးတော့ အရေးပေါ်သံပေးပြီးတော့ ကျွန်မတူလေးတွေကို ၀ိုင်းရိုက်နေ တာကို ကျွန်မရင်နာနာနဲ့ မြင်ခဲ့ ရပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကိုဒီလို ဆက်ဆံတဲ့ရဲတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိသင့်ဘူးလို့ပဲ ကျွန်မအဓိက ယူဆပါတယ်"ဟု ပြောကြားသည်။ ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသူ (၄) ဦး အား သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းမှ (ပ) ၁၅၈/၁၃၊ ပုဒ်မ (၃၃၂/၁၁၄) ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအားတာဝန်ဝတ္တ ရားဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ဟန့်တား ရန် မိမိအလိုလျှောက်နာကျင်စေ မှုတို့ဖြင့် အရေးယူထားပြီးထိုသူ (၄) ဦးအား အာမခံပေးရန်တောင်း ဆိုခဲ့သည့်လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက် နေရဲဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦးက "ကျွန်တော်ကသင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်း မှာပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့ ရဲဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦးအနေနဲ့ သွားကြည့်ခဲ့တယ်။ ဟိုရောက်တော့ ရဲတို့ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထက် ကျော်လွန်ပြီး ဖွတ်ဖွတ်ညှစ်ညှစ် ရိုက်ခံထားရတာကို ကျွန်တော် တွေ့ရတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အောင်ကိုကိုဆိုတဲ့ ကလေးက ခေါင်းကွဲသွားတယ်။ အဲဒီဒဏ်ရာ ကို စံပြဆေးရုံသွားပြတော့ခေါင်း ကို ၈တန်ချုပ်ခဲ့ရတယ်။ သူတို့ (၄) ယောက်လုံးကိုအာမခံနဲ့ ထုတ်ပြီးသူတို့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း မျက်နှာ၊ လည်ပင်းစတဲ့ နေရာ တွေ ဖူးရောင်ပြီး ထိခိုက်ထားတာ ကို ကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ပြည်တွင်းမီဒီယာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြော ချင်တာကတော့ မီဒီယာဆိုတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နစ်နာသူဘက်ကနေ မှန်မှန်ကန်ကန်ရပ်တည်တာဟာ စစ်မှန်တဲ့ မီဒီယာလို့ကျွန်တော် ယူဆထားပါတယ်လို့ပဲ ပြောချင် ပါတယ်"ဟု တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် ၀င်ရောက်ကူညီပေးနေသည်ရဲဝန် ထမ်းဟောင်းတစ်ဦးက ၎င်းင်းမြင် တွေ့ရပုံနှင့် ၎င်း၏အမြင်ကိုပြော သည်။ ဘင်ကားတိုက်ခံရသူစံပြ ၆ လမ်းနေနာမည်ပြောင်ကိုကုလား နာမည်အရင်းပြည့်ဖြိုးပိုင်က "ကျွန်တော့်ကိုတိုက်သွားတဲ့ ကာနာပတ်ကိုတော့ မမှတ်မိလိုက် ဘူး။ ကျွန်တော်ကားတိက်ခံရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရဲစခန်းကို သွားပြီး အကူအညီတောင်းတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းသုံးရောက်ကိုရဲတွေ က ၀ိုင်းရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ရဲစခန်း သွားပြောပြောချင်းရိုက်တာမဟုတ် ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းဝင် ပြီး အကူညီတောင်းတဲ့အခါမှာ ဒုရဲအုပ်ကိုညီညီအောင်က ကျွန်တော်တို့ကို "ညီလေးတို့ ဒီကိစ္စက ယဉ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့ အတွက် ယဉ်ထိန်းရဲနဲ့ဆိုင်တယ်။ အစ်ကိုတို့နဲ့ ဒိုက်ရိုက်မပတ်သက် ဘူးလို့" အေးဆေးစွာရှင်းပြနေတဲ့ အချိန်မှာ တာဝန်မှူးမျိုးကျော်ဆို တဲ့ သူရောက်လာပြီးတော့ "မော့ကောင်တွေ မင်းတို့က ဘယ်က ကောင်တွေလည်း ဘာကိစ္စကို အမှုဖွင့်မှာလည်း စခန်းမှာရုတ်စိစိ နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေစမ်း"အဲလိုပြော တဲ့အချိန်မှာ နောက်ထပ်စွတ်ကျယ် နဲ့ ပုဆိုးဝတ်ထားတဲ့ ရှဲဝန်ထမ်းတစ် ယောက်ကညစ်ညမ်းစွာဆဲရေး တိုင်းထွာပြီးဝင်ရောက်ရိုက်နှက် တော့။ ပထမတော့ ကျွန်တော် တို့ငြိမ်ခံနေခဲ့ပါတယ်။ နောက် နာကျင်လာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ခံပြီး ထွက်ပြေး ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာရဲတစ်ယောက်အရေး ပေါ်ဥသြဆွဲပြီးအရေးပေါ်၊ အရေး ပေါ်ဆိုပြီး ရဲစခန်းတံခါးကို ပိတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုစခန်းဝန်းတဲ့ရှိ ရဲအင်အား ၃၀ ခန့် (အရပ်ဝတ် ပါ) ၀ိုင်းရိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ စခန်းမှူး၊ မြို့နယ်မှူး စတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေရောက်လာ ပါတော့တယ်။ အဲတော့မှပဲ ကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်တာရပ်သွားပါတယ်။ နောက်တော့ရဲအရာရှိ ကြီးတစ်ဦးကအားလုံးတာဝန်ယူ တယ်။ ဘာမှမဖြစ်စေရဘူးလို့ပြော ပြီးဆေးကုသမှုခံယူရမယ်ဆိုပြီး စံပြဆေးရုံကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ အစ်ကိုကျွန်တော်ပြောတာမယုံလို့ ရှိရင် သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းက CCTV လုံခြုံရေးကင်မရာကို တောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်"ကျွန်တော် တို့ခံခဲ့ရပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လို လူငယ်တွေ နောက်တစ်ခါမခံရ အောင်ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်စေ ချင်တယ်။ဟု ကားတိုက်ခံရသူကို ကုလား (ခ) ကို ပြည်ဖြိုးပိုင်က ပြောသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက် ပြီး ဧပြီလ ၂၂ ရက် ၁၂ နာရီ ၂၅ မိနစ်အချိန်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်း စခန်းမှူးဖုန်းနံပတ် (၀၉- ၇၃၁၀၁၈၁၆)အား ဆက်သွယ်၍ ဧပြီ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေ ၆း၃၀ နှင့် ၇း၃၀ အတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် CCTV လုံခြုံရေးကင်မရာ၏ ဗီဒီယိုဖိုင်အားလာရောက်ကြည့်ရှု ခွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ရာ သင်္ဃန်းကျွန်းစခန်းမှူးက "ရန်ကုန် တိုင်းရုံးနဲ့ပဲဆိုင်တာကျွန်တော်တို့ နဲ့မဆိုင်ဘူး"ဟု ပြောကာဖုန်းချ သွားခဲ့သည်။
Kyawko Kokyaw shared Thuyaaung Thuyaaung Thuyaaung's photo.
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 4/24/2013 11:59:00 AM